Kooxda Manchester United oo doonaysa inay xagaagan la saxiixato Weeraryahan ka ciyaara horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 07 Juun 2020. Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay dooneyso weeraryahanka Wolverhampton Wanderers ee Raul Jimenez si ay u keento garoonka Old Trafford inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Inkastoo la kordhiyay sii joogista amaahda Odion Ighalo illaa iyo Janaayo 2021, haddana Red Devils ayaa la sheegay inay weli ka fekereyso inay la soo saxiixato weeraryahan cusub ka hor kal ciyaareedka 2020-21.
Jimenez ayaa hore loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Old Trafford, sida laga soo xigtay The Mirror Wolves ayaa laga yaabaa inay lumiso xiddiga reer Mexico xagaagan.
29-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed heer sare ah ku jiray heer kooxeed xilligan haatan socda, isagoo dhaliyay 22 gool, waxaana uu caawiye ka noqday 10-gool isagoo kooxda u saftay 44 kulan tartammada oo dhan.
Real Madrid ayaa sidoo kale horay loo sheegay inay xiiseynayaan xiddiga reer Mexico, kaasoo weli saddex sano uga harsan tahay qandaraaskiisa kooxda uu hoggaamiyo Tababare Nuno Espirito Santo.
Soo laabashada Marcus Rashford kaddib dhaawac dhabarka ah ayaa kor u qaaday xulashooyinka Man United ee weerarka ka hor kulankooda soo socda ee Premier League ee ay la ciyaarayaan kooxda Tottenham Hotspur 19-ka bisha June.
Sikastaba ha ahaatee, kooxda Man Utd ayaan wali si rasmi ah bedel ugu helin booska uu ka baxay Romelu Lukaku, kaasoo xagaagii la soo dhaafay ku biiray kooxda Inter Milan.
"Waan ku faraxsanahay inaan iska diiday Barcelona" – Xiddiga Kooxda PSG ee Angel Di Maria